Nhau - SUNTOP Yakakwira chaiyo diki yekucheka saizi fiber laser yekucheka muchina kuGerman
Fiber Laser Kucheka Machines
Imwe Tafura Tafura
Yakazara Yakapetwa NeDual Dhijitari Tafura
Diki Kucheka Saizi Series
Sheet Simbi Uye Tubes Laser Kutema Muchina
Laser sepombi Kucheka Machine
Otomatiki Laser Kutema Muchina
Otomatiki Laser Tube Kucheka Muchina
Dual Exchange Platform Pasina Yakakomberedzwa
Dual Exchange Platform Ine Tube Kucheka
Laser Chichatara Machines
Fiber Laser Chichatara Machine
Inotakurika Mini Fibha Laser Kuongorora Mashini
Inotakurika Yakakomberedzwa Fibha Laser Kuisa Mashini
Floor Rudzi Rakazara Yakakomberedzwa Fibha Laser Kuisa Mashini
Mini Smart Fiber Laser Kuisa Mashini
Kabhodhi Rudzi rweFibha Laser yekumaka Machine
Inobhururuka Fiber Laser Kuisa Mashini
UV Laser Kuisa Mashini
3D CO2 Laser Kuisa Mashini
Yakagadziriswa Laser yekumaka Machine
3D Fiber Laser Chichatara Machine
Otomatiki Laser Welding Machines
Ruoko-Held Laser Welding Machines
Zvishongo zveLaser Spot Welding Machine
CO2 Laser Kucheka Uye Kunyora Machine
3D Crystal Laser Mukati achiita zvokutemera Machine
Diki Saizi Crystal Laser Yemukati Kutema Muchina
Big Size Glass Laser Rwomukati achiita zvokutemera Machine
Laser Inosuka Mashini
Laser Consumables Uye Zvishongedzo
Fiber Laser jenareta
Laser Kucheka Musoro
Laser Kucheka kamwene
Laser Kudzivirirwa Lens
Laser Kucheka Ceramic Zvindori
YAG Laser Xenon-Mwenje
Laser Crystal Tsvimbo
Inotenderedza Lens Kune Fiber Laser Kucheka Muchina
Achitarisa neLens For Fiber Laser Kucheka Machine
Laser Chichatara Kudzora Kadhi
Fiber Laser Kucheka Kudzora Kadhi
Laser Kucheka Musoro Chibatanidza
Laser Scanner Musoro
Fiber Laser jenareta Kune Laser Chichatara (RAYCUS)
SUNTOP Yakakwira chaiyo diki yekucheka saizi fiber laser yekucheka muchina kuGerman
Yedu yepamusoro-chaiyo CNC fiber laser yekucheka muchina yakabudirira kuendeswa kuGerman. Mutengi ainyanya kupa masevhisi ekugadzirisa simbi uye anoda iwo chaiwo 0.08mm. Pakutanga, akasarudza vatengesi vazhinji, mushure mekuenzanisa kumisikidzwa kwemuchina, kurongeka, hunyanzvi uye sevhisi yemuchina, SUNTOP LASER inopedzisira yasarudzwa. Pano, tinoshuvira bhizinesi rake zvirinani uye zvirinani. SUNTOP icharamba ichishanda nesimba uye haizokuregerere pasi.
Zvinoenderana neazvino data rakaburitswa neGeneral Administration yetsika, China yekunze kutengesa nekutengesa kunze kwenyika yakasvika 2.84 trillion yuan munaGumiguru, kuwedzera kwe4.6% panguva imwecheteyo gore rapfuura (iyo iripazasi). Uku ndiko zvakare kukura kwakanaka kwekunze kwekutengeserana kupinza uye kutengesa kunze kwenyika kwemwedzi mishanu yakateedzana kubva muna Chikumi. Pakati pavo, kunze kwenyika kwaive 1.62 trillion yuan, kuwedzera kwe7.6%; kupinza kunze kwaive 1.22 trillion yuan, kuwedzera kwe0.9%; mari yekutengesa yaive 401,75 bhiriyoni yuan, kuwedzera kwe34.9%. Kuongorora kunoratidza kuti zvinhu zvakanaka kumba nekune dzimwe nyika zvichiri kuwedzera, uye kutengeserana kwekunze kunotarisirwa kuchengetedza kukura kwakatsiga mukati megore rose.
Pakazara, mumwedzi gumi yekutanga yegore rino, huwandu hwese hweChina hwekupinza kunze kwenyika uye kutengeswa kwezvinhu zvaive 25.95 trillion yuan, kuwedzera kwe1.1%. Pakati pavo, kutengeswa kunze kwaive ma14.33 trillion yuan, kuwedzera kwe2.4%; kupinza kunze kwaive 11.62 trillion yuan, pasi 0.5%; mari yekutengesa yaive 2.71 trillion yuan, kuwedzera kwe16,9%.
Ipo ichichengetedza kukura kwakadzikama pachiyero, chimiro cheChina chekutengeserana chave chichiwedzeredzwa, pamwe nekutengeserana kwekutenga kunze kwenyika uye kuwedzera kunze uye chikamu chiri kuwedzera. Mumwedzi gumi yekutanga, China yekutengesa kunze kwenyika uye kutumira kunze kwakasvika 15.6 trillion yuan, kuwedzera kwe2.8%, kuverengera 60.1% yeChina huwandu hwekutengeserana kwekunze, kuwedzera kwe1 muzana poindi panguva imwecheteyo gore rapfuura. Pakati pavo, kutengeswa kwenyika kwakasvika ku8.51 trillion yuan, kuwedzera kwe4.8%; kupinzwa kunze kwenyika kwakasvika 7.09 trillion yuan, kuwedzera kwe0.5%. Munguva imwecheteyo, kuunzwa uye kutumira kunze kwekugadzirisa kutengeserana kwakasvika 6.09 trillion yuan, pasi 6.2%.
Kuongorora uku kunoratidza kuti kukurumidza kupora kwehuwandu hwekutengesa kunze kwenyika kuri kupa kukurudzira kwekugadziriswa kweiyo yakazara bhizinesi chimiro. Wang Han, nyanzvi yezve hupfumi yeSociete Generale Securities, vakati kubva munaKurume, mukugadziriswa kweChina kunze kwenyika, simba rekudzoreredza rinonyanya kubva mukutengesa kunze kwenyika. Iyo gore-ne-gore kukura kwehuwandu hwehuwandu hwekutengeserana kunze kwenyika kwave kudzoka kusvika ku16,8% kubva pazasi nzvimbo ye - 4.5% munaKurume kusvika Gumiguru; kubva muna Ndira kusvika Gumiguru, kuwedzera kwekuwedzera kwehuwandu hwekutengeserana kwakadzora kusvika pa2.8%, kuverengera ingangoita 60% yezvakatengeswa neChina, kuwedzera kwe1% zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rapfuura. Munguva imwecheteyo, iyo yekuwedzera yekunze yekutengesa yekutengesa yaive - 7.5% gore-ne-gore, uye iri kuuya yekugadzirisa bhizinesi yaive - 14.7% gore-ne-gore. Mukuita kwekudzosa kunze kwenyika mushure mekupararira kwedenda, kutengeserana kwese pamwe neakakwira kukosha kuchapora zvirinani uye chimiro cheChina chekutengeserana chichavandudzwa.
Post nguva: Jul-28-2020
Pipe Fibre Laser Yakacheka, Tube Laser Kucheka, Fiber Laser Kucheka Muchina, China Fiber Laser Kutema Muchina, Fiber Laser Kucheka Machine, Fiber Laser Pipe Kutema Muchina,